Avengers: Endgame – Anime MM Sub Team
Part of the journey is the end.	Apr. 24, 2019	181 Min.
(Non-Spoiler and also spoiler 😁😁)
Spoiler ပါလာရင်​ alert ပြမှာမလို့အပေါ်ပိုင်းကိုတော့ စိတ်​အေးလက်​အေးနဲ့ပဲဖတ်​လို့ရပါတယ်​ဗျ
MCU အနေနဲ့သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ movie တစ်​ကားကို ထုတ်​ပြလိုက်ပြန်ပါပြီ ဇာတ်​ကားအစအဆုံးကို စိတ်​ဝင်​စားစရာ Plot နဲ့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်​ခဲ့ပြီး Avengers တွေရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်းကို ရင်​တမမနဲ့ စောင့်​ကြည့်​နေခဲ့ရပါတယ်​……တစ်ကားလုံးမှာ Comedy, Action, Drama စတဲ့ emotion အစုံ အကုန်​လုံးကို သေချာစနစ်​တကျ ချပြနိုင်​ခဲ့ပြီးတော့ Avengers တွေရဲ့ Thanos Snap အပေါ်ခံယူချက်​ကိုပါ သေချာချပြနိုင်​ခဲ့ပါတယ်​…..တိုနီနဲ့ Cap ရဲ့ Friendship ကလည်း တော်​တော်​လေးကိုခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်ပေါ့ဗျာ
Battle on titan မှာဆိုရင်​ တိုနီဟာသူတို့အရေးမလှတဲ့အချိန်​မှာ Cap ကိုမျှော်​လင့်​ခဲ့မိသေးတာတွေ Thanos ကို Cap သာရှိရင်​ အနိုင်​တိုက်​နိုင်​မယ်​လို့တွေးမိတာတွေကစပြီးသူတို့ Friendship ကိုသေချာပြနိင်​ခဲ့ပါတယ်​
ဒီတကားလုံးကို သေချာရိုက်​ကူးပေးခဲ့တဲ့ Russo Brothers ကိုလည်းလေးစားလို့မဆုံးပါဘူးဗျာ
Admin သူငယ်​ချင်းတွေဆို ငိုယိုပြီးအသက်​ရှကြပ်​တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရတာမလို့သွားကြည့်​ရင်​ တစ်​ရှူး ရေဘူး ပရုပ်​ဆီတို့ဘာတို့ဆောင်​သွားသင့်​ပါတယ်​ (အယ့် ပရုပ်ဆီဆောင်သွားလို့ရုံထဲအနံ့တွေထွက်ပြီးပြဿနာတက်ရင် Admin နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ:3)
နှလုံးရောဂါလည်းရှိ SH ကိုလည်း Crazy ဖြစ်​ရင်​တော့ သွားကြည့်​ဖို့ကိုသေချာပြန်​စဉ်းစားစေချင်​ပါတယ်​
တစ်ခါတစ်လေမှာအမြဲအနိုင်​ယူနေတာထက်​ လက်​စားချေရတာကပိုပြီး ကောင်းပါတယ်​ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က AVENGERS တွေလေ!!
Spoiler ရှောင်​နေရင်​တော့ CMT SECTION ကိုဝင်မကြည့်ကြဖို့ ပန်​ကြားအပ်​ပါတယ်​ဗျာ 🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️
အောက်ကစပြီးတော့ SPOILER ပါလာပါပြီ
Plot ကိုအသေးစားပဲ ခြုံ့ပြီးရှင်းပြပါမယ်​ တချို့ဟာတေကပြောတာထက်​ ကိုယ်​တိုင်​ကြည့်​ရင်​ Epic ပိုဖြစ်လို့ပါ
မရှင်းတာ ဒါမှမဟုတ်​ရုံထဲမှာနားမလည်​ခဲ့တာရှိရင်​Admin တို့ကိုလာမေးလို့ရပါတယ်​ Admin တို့သိရင်​ ဖြေပေးပါမယ်​ မသိလည်း Google ခေါက်​ပြီးဖြေပေးပ့ါမယ်​ 😉😉😉
Tony တို့ကို Captain Marvel လာကယ်​တာဖြစ်​ပြီးအဲ့ကနေမှ Nebula ကြောင့်​Thanos ရှိတဲ့နေရာကို Avengers တွေသွားပြီး Thanos ဆီက Infinity Gauntlet ကိုယူပါတယ်​ (IG လို့ပဲဆက်သုံးပါမယ်)
IG က Gem တွေကို Thanos ကဖျက်​ဆီးလိုက်​တဲ့အတွက်​ဘာမှလုပ်​မရတော့လို့ Thor ကဒေါကန်​ပြီး Thanos ကိုခေါင်းဖြတ်​သတ်​လိုက်​ပါတယ်​
အဲ့ကနေ နောက်​၅နှစ်​ကြာချိန်​မှာတော့ Time Vortex ခလုပ်​ကိုကြွက်​ကနင်းမိပြီး Scott တစ်​ယောက်​Quantum realm ထဲက လွတ်​လာပါတယ်​အဲ့နောက်​ဖြစ်​ခဲ့တာတေအကုန်​သိပြီးမှာတော့ Avengers တွေဆီသွားပြီး Time Travel နဲ့ပြန်​ပြင်​ရင်ရကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်​အဲ့ကနေ Avengers တွေ TimeTravel လုပ်​ပြီး
Stone တွေကိုပြန်​စုကြပါတယ်​ အဲ့ကနေမှ Gem တွေစုံခဲ့သလို Black Widow က Soul Gemအတွက်​သူကိုယ်​သူစတေးခဲ့ပြီး Gem ရလာခဲ့ပါတယ်​ အဲ့နောက်​Professor Hulk ကသေသူတွေကိုပြန်​ခေါ်ဖို့လက်​ဖျောက်​တီးခဲ့ပြီး သတိလစ်​သွားပါတယ်​
အဲ့မှာတခုရှိတာက Nebula ကအတိတ်​ကိုသွားပြီး Power Stone ယူတဲ့အခါမှာအတိတ်​က Nebula နဲ့အနာဂတ်​က Nebula တို့သုံးတဲ့ Network ကတစ်ခုတည်းဖြစ်​နေတဲ့အတွက်​စိတ်​ချင်းဆက်​ပြီး အတိတ်​က Nebula ကအကုန်​သိပြီး Thanos ကိုပြောပြလိုက်​ပါတယ်​ အဲ့ကနေမှ Thanos ကသိသွားပြီးအနာဂတ်​ Nebula ကိုဖမ်းပြီးအတိတ်​က Nebula နဲ့အစားထိုးလိုက်​ပါတယ်​နောက်​တော့ အတိတ်​က Gamora ကအနာဂတ်​က Nebula နဲ့ပေါင်းပြီးThanos ကိုဆန့်​ကျင်​တဲ့စစ်​ပွဲထဲပါခဲ့ပါတယ်​
အတိတ်​က Thanos ကလက်​ရှိ Avengers Headquarter ကိုလာပြီးအကုန်​ဖျက်​ဆီး ပီး Cap, Thor, Tony တို့နဲ့တိုက်​ခိုက်​ခဲ့ပါတယ်​ အကုန်​ရှုံးနိမ့်​ပြီး Thor ခံနေရချိန်​ Cap က Mjolnir ကို Worthy ဖြစ်​သွားခဲ့ပြီး Thanos ကိုဝင်​ဗျင်းခဲ့ပါတယ်​ ဒါပေမယ့်​
Thanos ကအကုန်​ အမှောက်​သိပ်​ပြီး သူ့ army ကိုခေါ်လိုက်​ချိန်​မှာတော့ Hulk snap ကြောင့်​အသက်​ပြန်​ရှင်​လာတဲ့ Hero တွေကို Dr.Strange ကစုပြီးခေါ်လာပါတော့တယ်​အဲ့ကနေ Epic battle ကြီးအပြီးမှာ Thanos ဟာ Avengers တွေလုပ်​ထားတဲ့ Gauntlet ကြီးရပြီးလက်​ဖျောက်​တီးဖို့ကြံပါတော့တယ်​
အားလုံးကဝင်​တားပေမယ့်​ ရှုံးနိမ့်​ခဲ့ပြီး နောက်​ဆုံး
Iron Man ဟာGauntletကို ဝင်​ဆွဲဟန်​ဆောင်​ပြီး Gem
တွေကိုဖြုတ်​လိုက်​ပြီး သူ့ Armor မှာတပ်​ပြီးလက်​ဖျောက်​တီးလိုက်​ပါတယ်​ အဲ့နောက်​တော့သူ့အလိုအတိုင်း Thanos နဲ့သူ့ army အကုန်​သေသွားခဲ့ပြီး Stone ဒဏ်​မခံနိုင်​တဲ့အတွက်​ Tony လည်းသေသွားခဲ့ပါတယ်​အဲ့နောက်​တော့ဈာပနအပြီးမှာ Cap ကယူခဲ့တဲ့ Gem တွေကိုသူ့ Timeline မှာသူပြန်​ထားပြီးတော့ Peggy ရှိတဲ့ Timeline မှာသာနေထိုင်​ခဲ့ပြီး အအသက်​ကြီးပြီးအိုမင်းသွားခဲ့ပါတယ်
Thorကတော့ GOTG နဲ့ပေါင်းပြီးအာကာသထဲလိုက်​သွားကာ Valkyrie ကို New asgard ရဲ့ခေါင်းဆောင်​အဖြစ်​ထားခဲ့ပါတယ်​
အကယ်၍မရှင်းတာရှိရင်​ Cmt section မှာထက် CB မှာလာမေးစေလိုပါတယ်ဗျ!
Download HD Burmese 194mb
© 2019 Anime MM Sub Team. Todos os Direitos Reservados.